ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ဘီဘီစီသတင်းထောက် ဂျော်နသန်ဟက်ဒ် သုံးသပ်ပြတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အခြေအနေ (အသံ)
ဘီဘီစီသတင်းထောက် ဂျော်နသန်ဟက်ဒ် သုံးသပ်ပြတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အခြေအနေ (အသံ)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ လူတကာ သဲသဲလှုပ် ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေး ပြယုဂ်နေရာကနေ အတက်အကျ အနိမ့်အမြင့် ရွေ့လျားနေတဲ့ မျက်မှောက် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းသစ်ထဲက အားကြီးတဲ့ လူထုထောက်ခံမှုများတဲ့ လူသားဆန်တဲ့ တိုင်းပြည်နဲ့လူထုကို လှုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေးသမားအဖြစ် ပြောင်းလဲရောက်ရှိသွားပါပြီလို့ ဘီဘီစီသတင်းထောက် ဂျော်နသန်ဟက်ဒ်က သုံးသပ်ပါတယ်၊ အပြည့်အစုံကို နားဆင်ဝေဖန်နိုင်ကြပါတယ်။
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 2:07 PM
What Johnnathan analyzed does not reflect current situation and real stand of majority Burmese people. Please learn and get more facts.
ကိုဟန်ဝင်းအောင်က နောက်ကွယ် ကကြိုးကိုင်နေတာမဟုတ် ၊ ရှေ.ကနေ ပြောင် လုပ်နေ တာတွေ.ရပါတယ် ။
နောက်ကွယ် ကကြိုးကိုင်နေတာ က မှ တိုင်းပြည်သယံဇာတတွေ
(သဘာဝဓါတ်ငွေ. ၊ သစ်တော၊ သတ္တု စသည်) ကို သူခိုးဈေးနဲ. ရောင်းစားပြီး တိုင်းပြည်ကို
ဒေါ်လာ ဘီလျံပေါင်းများ စွာ အကြွေးတင်စေတဲ. တပ်မတော် မာစတာကြီးများ ပါ၊
သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်က ဦးပိုင်၇ဲ. ဒီစီမံကိန်းကြီး ပျက်သွားရင် သူ.နောက်ကွယ်ကမာစတာကြီးများ ရဲ.အန္တရာယ် (နောက်ကြောင်း
ပြန်လှည်.နိုင်ပုံ နဲ. ၂၀၁၅ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကြီးပျက်သွားနိုင်ခြေ ) ကို ဒေါ်စုကိုပြောပြီး
နောက်ကနေ GUIDE LINE လုပ်ပေးထားတာပါ ၊
ဒေါ်စုကလည်းသမ္မတ သိပ်ဖြစ်ချင်ပါတယ်၊ တိုင်းပြည်ကို ကယ်တင်ချင်၊ တိုးတက်စေချင်
လို.ပါ ။ ဒီတော. ယခင် စစ်တပ်က တပ်မတော် မာစတာကြီးများကတိုင်းပြည်သယံဇာတတွေ
ကို ယူလက်စနဲ. ယူပါစေ ၊ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ နိုင်ပြီး သမ္မတဖြစ်ရေးအပျက်မခံချင် ၊
မြန်မာနိုင်ငံ ရှေ.နေများကွန်ယက်၊ ဘဘဦးဝင်းတင် ၊ ကိုဟန်ဝင်းအောင် စတဲ.ပြည်သူတွေ၊
ဒီမိုကရေစီကို ချက်ချင်းပွေ.ဖက် ချင်ကြသူများ က ဦးပိုင် လက်ဝါးကြီးအုပ်ခြယ်လှယ်မှုချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းဖို. ဒါကိုအပြင်းအထန်ကန်.ကွက်နေကြတာ ၊
အဓိက က တိုင်းပြည်ကို ချစ်ကြတာ အတူတူပါ ၊ မင်းကိုနိုင်ပြောသလို
၇ည်မှန်း ချက်တူ သူချင်း လွတ်လပ်စွာ သဘောထားကွဲကြပါ ၊
ဒါပေမယ်. အချင်းချင်း မမုန်းကြပါနဲ. ။
ပြည်သူ အများစု (THE WHOLE BURMA) ရဲ.ဆန္ဒ ဟာ အမှန်တရားဆိုတာတော.
အားလုံးလက္ခံ ကြ၇လိမ်.မယ် ။ ။ ။
တပ်ထွက် သမတကြီးနဲ. နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ေ၇းကို ထိပ်ပိုင်းနေ၇ာ ဇွတ် ၀င်ယူထားသူများ
ဦးပိုင် ကို လွှင်.ပစ်ပြီး ပြည်သူတွေရဲ. ရိုသေလေးစား မှုကိုရယူဖို. စိတ်ကူးမရှိကြဘူးလား ?